१५ सय वनस्पति कहाँ बेच्ने, कसरी बेच्ने? | Canadian Reporters
Posted on June 18, 2019 by क्यानेडियन रिपोटर्स
नेपालको विकासका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उद्यमशीलतामार्फत हाताहाती प्रतिफल दिलाउन सक्ने धेरै ‘इनोभेटिभ’ कम्पनी र संस्थाहरूको स्थापना हुन जरुरी छ। यिनको स्थापनाको अनिवार्य पूर्वाधार भनेको हाम्रा प्राविधिक शिक्षालय, विश्वविद्यालय र अन्य अनुसन्धाता संस्थाले पर्याप्त मात्रामा दक्ष-अर्धदक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्नु हो।
उद्यमशीलता अन्तर्गत हाम्रो ऐतिहासिक महत्वका आयुर्वेदिक औषधि, खाद्य र ‘सप्लिमेन्ट’ मुख्य छन्। स्थानीयतामा आधारित कृषिजन्य उद्यम विकासका लागि ‘इनोभेटिभ कल्चर’ र पूर्वाधार विकास जरुरी छ। स्थानीय स्तरमा प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालय मार्फत प्राविधिक ज्ञान र प्रवर्द्धनमा ‘स्टार्टअप’का लागि ‘इनोभेटिभ’ सीप हस्तान्तरण गराउन यो खुला अवधारणा पत्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो।
यसरी हिसाब गर्दा पनि ८ प्रतिशत जमिनमा मात्र पुस्तौंपुस्तादेखि हाम्रो सारा कृषिको जोडबल थुपारिरहेका छौं भन्ने प्रस्टिन्छ। १६ प्रतिशत खेतीयोग्य मानिएको जमिनमा हाम्रो ८० प्रतिशत कृषिको लगानी घोप्टाए पनि कृषकको जीवनशैली उँभो लागिरहेको छैन। जंगल भनिएको २४ प्रतिशत र अन्य भनिएको ४४.०८ प्रतिशत गरी जम्मा ६८.०८ प्रतिशत भूभाग जस्ता छन्। त्यस्तै अवस्थामा सजिलै उम्रने र हुर्कने आयुर्वेदिक, औषधिजन्य, वासनादार वनस्पति तथा खाद्यान्न लगायत अरू थुप्रै वनस्पतिको पहिचान, प्रशोधन र व्यावसायीकरण गर्न सके ‘कृषि क्रान्ति’ योजनामा मात्र सीमित हुने छैन।
हालसम्म नेपालका वनस्पति र व्यावसायिक जीवाणुहरूको अध्ययन आयुर्वेदिक महत्वलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ। तिनको सिजनिङ, सेनिटरी, जैविक विषादी, जैविक मल, खाद्य, सौन्दर्य, पोषण सप्लिमेन्ट, लत्ताकपडा, र अन्य प्रयोजनमा औद्योगिकीकरणका लागि ‘इनोभेटिभ कल्चर’ विकास हुनुपर्छ। जसमा हाम्रो ध्यान पुगिरहेको छैन।
यसका लागि मुलुकभित्र ‘इनोभेसन’ संस्कृति विकास हुनैपर्छ। त्यसको अनिवार्य शर्त भनेकै राष्ट्रिय नव-प्रवर्द्धन (आविष्कार) केन्द्र स्थापनाको परिकल्पना, स्थापना र व्यवस्थापन हो।
नेपालमा प्राविधिक ज्ञानका विषयमा विदेशबाट सिधै पूर्ण र प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाइने कानुन छ। यो सुविधा ‘टेक्नोलोजी र कन्टेन्ट’ दिनसक्ने संस्थामा प्रयोग हुन जरूरी छ।
एकाध मेडिकल कलेजहरूमा यस्तो विदेशी लगानी प्रयोग गरिएको छ। कृषिजन्य उद्यमशीलता र नवप्रवर्द्धनका विषयमा प्रवासी नेपालीहरूले समेत पहिचान बनाइसकेका छन्। हाम्रो हावापानी र माटो सुहाउँदो प्राविधिक सीप र उद्यममशीलता हस्तान्तरणमा यस्तै दक्ष प्रवासी, स्वदेशी र ‘इन्कुबेटर सेन्टर’हरूको सहयोग जुटाउन सकिन्छ।
हाम्रो जस्तॊ भौगोलिक अवस्था छ, त्यसमै अनुकूल भएर हुर्कने हजारौं रैथाने वनस्पतिले हाम्रो जीवनशैली सुधार्ने गरी आय दिन सक्छन्। संसार पछि लाग्दै गरेको ‘डिटक्स एग्रोफुड’ को उत्पादनस्थल नेपाली भूमि हुनसक्छ। यसकारण राज्यले खेतीसँगै यो क्षेत्रमा पनि ध्यान र लगानी बढाउनुपर्ने समय आएको छ। हामीकहाँ भएका उपजहरूमा प्रविधि प्रयोग गरी मूल्यवान् बनाउन प्रयास गरिनुपर्छ। स्रोत व्यवस्थापन र तालिम सञ्चालन गरी उचित मूल्य कायम हुनुपर्छ।
यसका लागि कृषकहरुलाई आयुर्वेदतर्फ आकर्षण गर्न जरुरी छ। गाउँगाउँमा स-साना कृषि उद्यम विकास चाहिन्छ। जडिबुटीजन्य खाद्य, औषधि, आयुर्वेद, जैविक मल, बिषादी, वैकल्पिक ऊर्जा लगायत अन्य क्षेत्रका ग्रामिण पकेट क्षेत्र विस्तार गरिनुपर्छ। यसनिम्ति स्थानीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने, ‘स्टार्टअप’ र सीपमूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा ‘आइडिया इन्कुबेसन’ गर्ने इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनु जरुरी छ।
‘स्टार्ट द स्टार्टअप’ र सीपमूलक स्वरोजगार विस्तार गर्न तालिम र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्ने।
समुन्द्रशास्त्रमा लेखिएको छ: यस्ता चिन्ह भएकी युवती रोज्नुस्, तपाईंको भाग्य खुल्नेछ
विशेष स्थलगत: अमेरिकाका २९ वटा जेलमा १ सय ११ नेपाली कैदिहरु
अन्तरिम संविधानबाट बनेको यो सरकार परिवर्तन हुन सक्दैन – डा. भीमार्जुन आचार्य
विजय जोलीले विद्या भण्डारी लाई बालुवाटारमानै भेटे:३५ मिनेट वार्ता
लग्जेम्बर्गको एनआरएनए बिज्ञ भेला !
एनआरएनका अमेरिका, यूरोप र मध्य पूर्वका सम्मेलन उपलब्धीमुलक !!